Ngwanrọ njikwa ihe mberede | Motadata
Ngwanrọ njikwa ihe omume IT
Zaghachi na nkwụsị ọrụ IT ngwa ngwa
Ngwá ọrụ njikwa ihe omume ITIL nke na-elekwasị anya na ịdị mma na ọsọ site na usoro ọrụ nwere ọgụgụ isi na akpaaka.
Soro na-arụpụta ihe karịa
Njikwa ihe omume IT
Motadata ServiceOps ITSM sọftụwia njikwa ihe omume ITIL na-enyere gị aka ịhazi usoro mkpebi tiketi gị site na iji njikwa tiketi na-arụsi ọrụ ike, akpaaka smart na nkwado ọtụtụ ọwa.
kwalite arụmọrụ site na Njikwa tiketi akpaaka
Melite oge nzaghachi site na ịmegharị usoro ọ bụla nke usoro ndụ tiketi site na nhazi ọkwa ruo ọrụ.
Kenye tiketi na-akpaghị aka site na iji AI-enyere aka ịhazi oke ibu na-edozi algọridim
Tinye ụzọ tiketi site na iji arụ ọrụ arụ ọrụ
Meziwanye ọkwa maka nkwurịta okwu ka mma na ndị isi ihe
Gbaa mbọ hụ na a ga-eme mkpebi n'oge Nchịkwa SLA
Mụbaa afọ ojuju ndị ọrụ site n'ịkwalite arịrịọ na-edozibeghị n'oge ma nyefee ha n'aka onye ọrụ nka dị iche.
Ekenye SLAs akpaaka dabere na njirisi
Nzaghachi na mkpebi oge na-abawanye
Nchekwa onwe-escalation nke SLAs dabere na iwu azụmahịa
Nye ndị ọrụ njedebe ike
Kwado ndị ọrụ ka ha bulie na soro tiketi ha wee chọta mkpebi maka okwu ndị a na-ahụkarị site na iji ntọala ihe ọmụma.
Nkwado ọtụtụ ọwa iji bulie tiketi
Portal ọrụ onwe nke ntọala ihe ọmụma kwadoro
Ọwa nkata dị ndụ
Afọ ojuju onye ọrụ njedebe ka mma
Nyochaa arụmọrụ oche ọrụ na Anya
Chọpụta nsogbu, mee mkpebi ndị nwere nghọta, wee mee ka mmekorita dị n'etiti otu otu site na otu ihuenyo jikọtara ọnụ.
Nweta visibiliti na tiketi niile yana ọganihu ha site na iji dashboard dị mfe iji
Soro ndị ọkachamara na-arụ ọrụ site na iji akụkọ na-apụ apụ, enwere ike ịhazi ya
Bupụ akụkọ n'ụdị pdf, csv na xls
Otu esi atụpụta ọnụ
ROI nke Mobile Self Service
Na Go Mobile App
Ụzọ 3-akụkụ iji nye njikwa kacha mma nye ndị na-arịọ arịrịọ, ndị na-akwado ya na ndị ọkachamara
Welite oge & akụrụngwa site na ime ngwa ngwa nkwenye na ị na-aga
Mee ka ndị ọrụ gị nwee ntụkwasị obi n'onwe ya site na ntọala ọmụma
Mmefu dị ala
Ihe ndị ahịa anyị na-ekwu maka ya
Ndị mmadụ na-ele Motadata anya dị ka ihe na-eme ka ọ pụta ìhè na ihe kpatara ihe nyocha, agbanyeghị; ọ kariri nke ahu. Ọ na-enye ezigbo oge data na alerts iji lebara okwu ọbụna tupu ha bilitere na-emetụta ndị ọrụ njedebe. Nke a abụghị ọbụna ihe atumatu. Anyị enwetalarị nke a site na ikpo okwu na-esote-gen.
Kwazie ndị ọkachamara ọrụ IT nke ọma ka ha jiri ngwa ITIL njikwa ihe mberede mee ihe na-adịghị mma.
Tiketi jikọtara ọnụ
Ndị na-ahụ maka nka nwere ike jikọta tiketi ndị yiri ya wee mee otu nyocha. Ya mere ibelata ọnụ ọgụgụ tiketi n'ozuzu ya.
Nkwado usoro ọrụ
Mepụta usoro ọrụ ga-etinye tiketi na nkwado tupu mmadụ enwee ike ime mgbanwe ọ bụla dị ka akara tiketi ka emechiri emechi.
Gwakọta njikwa ihe omume na ntọala ọmụma iji belata ọnụ ọgụgụ tiketi ewepụtara maka nsogbu nkịtị
Ikpo okwu na-enye ndị ọkachamara aka ịgbanwe ozi nke ọtụtụ ihe omume ma ọ bụ arịrịọ ozugbo
A na-ajụ ndị na-arịọ arịrịọ na-akpaghị aka maka nzaghachi gbasara ahụmịhe ha ka usoro mkpebi ihe merenụ gasịrị
Kọwaa ihe bara uru na ihe mere mgbe ị na-ebuli tiketi na ọnụ ụzọ onye na-arịọ arịrịọ
Jiri ngwa ndị ọzọ mee ka ike mbanye dị mfe site na iji REST API nwere ihe owuwu anyị mepere emepe
Jikwaa tiketi ngwa ngwa mgbe enwere mmụba na olu tiketi iji hụ na enwere ọrụ kacha
Ihe atụ bụ mgbanwe mgbanwe/akpaaka nke onye ọrụ nka nwere ike ịgba ọsọ na tiketi ọ bụla.
Kedu ebumnuche ITIL njikwa ihe omume?
Ebumnuche nke njikwa ihe omume bụ iweghachi ọrụ ọrụ oge niile ngwa ngwa o kwere mee iji belata mmetụta ọjọọ na mmemme azụmahịa ma na-ejigide ogo ọrụ.
Onye ọrụ nwere ike ịdebanye ihe merenụ wee soro ya site na okirikiri ndụ ihe merenụ ruo mgbe eweghachiri ọrụ ahụ wee dozie okwu ahụ. Njikwa ihe mberede na-emekwa ka gị na ndị ọrụ nwee nkwurịta okwu kwesịrị ekwesị n'ime oge ndụ nke ihe ahụ merenụ. Enwere ike nyochaa, nyochaa, na nyochaa ọkwa ọrụ na arụmọrụ site na akụkọ.
Ijikwa ihe omume n'ozuzu nwere usoro usoro a:
• Ịbanye ihe omume
• Nchịkọta ihe omume
• ebute ụzọ ihe omume
• Ihe omume omume
• Ndepụta ihe omume
• Mkpebi ihe omume
• Mmechi ihe omume
Njikwa ihe omume ITIL vs njikwa nsogbu
Ọ bụ ezie na njikwa ihe omume na usoro nchịkwa nsogbu yiri nke ahụ, isi ihe dị iche bụ na ebumnuche ikpeazụ nke usoro abụọ ahụ. Ọ dị oke mkpa ịmara na ebumnuche njikwa ihe mberede bụ iji dozie ihe merenụ ngwa ngwa na nke ọma dị ka enwere ike ma na-ebelata mmetụta ọjọọ. Ndị otu nkwado nwere ike ịga n'ihu na njikwa nsogbu, iji zere ihe omume yiri nke ahụ na-eme n'ọdịnihu site n'ịkọba ihe kpatara ya.
Ịghọta ọdịiche dị n'etiti ihe omume IT na nsogbu nwere ike inyere ndị nwe ụlọ ahịa na ndị njikwa aka ịkparịta ụka nke ọma na ndị otu nkwado ma mepụta atụmanya ziri ezi gbasara nsonaazụ.
Gịnị bụ ihe merenụ vs. arịrịọ ọrụ?
Arịrịọ mberede bụ arịrịọ na-egosi ọgbaghara ọ bụla na-atụghị anya ya ma ọ bụ ibelata ogo ọrụ IT dị adị. Dịka ọmụmaatụ, enweghị ike iweghachite ozi-e, chere mperi mbipụta ihu, wdg.
Arịrịọ ọrụ bụ arịrịọ sitere n'aka ndị ọrụ gaa na tebụl ọrụ IT iji nyefee nkwado ma ọ bụ weta ngwaike ọhụrụ, ngwanrọ, ozi, akwụkwọ ma ọ bụ ndụmọdụ. Dịka ọmụmaatụ, ịwụnye sọftụwia na ọdụ ọrụ, ịrịọ ngwaọrụ ngwaike, ịgbanwe okwuntughe furu efu, wdg.
Yabụ, ọ bụrụ na ngwa nbipute dị adị anaghị arụ ọrụ, mgbe ahụ ị nwere ike ịbanye ihe merenụ mana ọ bụrụ na ịchọrọ ngwa nbipute ọhụrụ welie arịrịọ ọrụ.
Kedu otu esi eji njikwa ihe mberede eme ihe na nzukọ?
Ndị otu na-eji usoro njikwa ihe mberede nagide ihe omume na-emeghị atụmatụ, belata mmetụta ha na usoro azụmahịa, na ịmaliteghachi ọrụ ọrụ nkịtị ozugbo enwere ike. Ijikwa ihe omume na-enyere òtù dị iche iche aka ịbawanye ọkwa nnyefe ọrụ ha na-aga n'ihu site n'inye mkpebi ngwa ngwa ka ha na-edobe ogo ogo ọrụ na nnweta ekwenyero.
Njikwa ihe omume na-enyekwa aka kwalite arụmọrụ na nrụpụta n'ime nzukọ a niile n'ihi ntụkwasị obi akụrụngwa IT dị elu, si otú a na-ebelata ụgwọ ọrụ ma ọ bụ mfu ego ha nwetara na ihe omume IT. Ọ na-enyere aka ịnye nzikọrịta ozi ime na mpụga ka mma n'ime oge ndụ ihe merenụ, na-ebute ịkwalite na idowe afọ ojuju onye ọrụ.
Usoro nlekọta ihe merenụ na-enyekwara ndị otu ụlọ ọrụ aka inyocha na idekọ ihe mere na otu esi edozi ha iji gbochie ma na-aga n'ihu na-emezi nchọpụta mmalite na mbelata ihe omume n'ọdịnihu.